राजेश हमाल डराए कि हराए ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentराजेश हमाल डराए कि हराए ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – नेपाली फिल्ममा अभिनेता राजेश हमाल निर्विकल्प एक मात्र सुपरस्टार हुन् । अभिनेता हमालको जस्तो क्रेज आजसम्म कसैले पनि बनाउन सकेका छैनन् ।
क्षणिक सुपरस्टार नेपाली फिल्ममा जन्मिए । तर, हमाल जस्तो सुपरस्टार अहिलेसम्म जन्मिएका छैनन् ।
हमालको क्रेज फिल्म भित्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा छ । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण दलमा सहभागी भएर भारत गएको कुराले पनि उनको लोकप्रियता र वौद्धिकताको मापन गर्दछ ।
तर, यति भनिरहँदा अभिनेता राजेश हमालले दिएको योगदान नेपाली सिनेमाका लागि पर्याप्त छ त ? अभिनेता हमालले हलमा सफलता र असफलताको स्वाद उस्तै चाखेका छन् । तर, उनले सिनेमाको बजारमा जे जति गर्न सक्थे, त्यती गरेका भने छैनन् ।
अभिनेता हमाल अहिले सिनेमाको ठूलो फ्रेम भित्र कैद नभएको धेरै भयो । हमाललाई लिएर निर्माताहरु रिस्क मोल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । किनकी, उनलाई लिएर सिनेमा चल्छ या चल्दैन भन्ने प्रष्ट छैन भने उनलाई लिएर कस्तो सिनेमा बनाउने भन्नेमा पनि निर्माता स्पष्ट छैनन् ।
अभिनेता हमालले फिल्म बागमतीमा अभिनय गरे । यो सिनेमामा उनले निभाएको भूमिकाबाट उनी खुबै आशावादी रहेछन् । तर, भनेजस्तो भएन । सिनेमा चलेन । अर्को सिनेमा सकुन्तलामा उनले साडी नै लगाए । साडी लगाएर फाइट पनि खेले । तर, दर्शकले पत्याएनन् । हमालले अपेक्षा गरेका २ सिनेमा लगालग असफल भए । यसरी हमालको अपेक्षामा तुषारापात भएपछि उनी अहिले मौन छन् । हमाल यसलाई संयमित भएको बताउँछन् । हमालको भाषामा उनी सिनेमा खेल्न र बनाउनबाट हराएका, डराएका भन्दा पनि संयमित भएका हुन् ।
उनको यो भाषाबाट के वुझ्न सकिन्छ भने, उनी मौन बस्नुको अर्थ राम्रो कथा खोज्नु हो । उनी अब असफल हुन चाहदैनन् । यसैले पनि उनी सकुन्तला र बागमतीको नियती नदोहोरियोस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।
राजेश हमालले सिनेमा निर्देशन गर्ने भनेको कथा पनि लामो भैसक्यो । यो विचमा थुप्रै हिरो हिरोइन निर्माता बनिसकेका छन् । तर, हमालको ब्यानरबाट न त सिनेमा बनेको छ न त उनको नामबाट फिल्मको निर्देशन ।
के यसमा पनि हमाल संयमित नै होलान् त ?
राजेश हमालले सिनेमालाई बोक्नु पर्ने हो । सिनेमाको बजार सुकेको समयमा उनले बजारलाई उकास्नका लागि कदम चाल्नुपर्ने हो । तर, हमाल उकासिएको बजारमा बल्ल सिनेमा बनाउने मुडमा देखिएका छन् । यसलाई उनको स्वार्थ भन्न नसकिएला र ?
राजेश हमाल सिनेमा खेल्नबाट हराएका छन्, सिनेमा निर्देशन गर्नबाट डराएका छन् । हमालको क्रेज यत्तिकै नसकियोस् । उनले सिनेमाको बजारलाई धेरै कुरा दिनु छ र दिन आवश्यक पनि छ । हमालको नामले बनाउने क्रेज र हाइप अरु कलाकारको नामले बन्दैन । हराउने र डराउने भन्दा पनि अब जोखिम मोल्ने बेला राजेश हमालको आएको छ ।
ko banchha karodpati
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’बाट बाहिरिए पछि आफ्नो कोच सनुपलाई यस्तो व्यङ्ग्य